RASMI: Maamulka Horyaalka La Liga Oo Si Rasmi Ah U Shaaciyay Taariikhda & Waqtiga Camp Nou Lagu Ciyaari Doono Kulanka El Clasico-da Labaad Ee La Liga. - jornalizem
RASMI: Maamulka Horyaalka La Liga Oo Si Rasmi Ah U Shaaciyay Taariikhda & Waqtiga Camp Nou Lagu Ciyaari Doono Kulanka El Clasico-da Labaad Ee La Liga.
Maamulka horyaalka La Liga ayaa si rasmi ah u shaaciyay taariikhda iyo waqtiga Camp Nou lagu ciyaari doono kulanka labaad ee El Clasico-da horyaalka La Liga iyada oo haddaba ay si rasmi ah jamaahiirta kubbada cagta aduunku ay jadwalkooda ugu darsan karaan. Sida caadada ah maamulka La Liga ayaa si rasmi ah u shaaciyay waqtiga la ciyaarayo kulanka heerka kooxood ee kubbada cagta ugu wayn ee Calsico-da.
Real Madrid ayaa Camp Nou soo booqan doonta maalinta axada ee May 6 marka ay saacada 8.45pm CEST wuxuuna kulanka El Clasico-du ka tirsan yahay kulamada 36 aad ee horyaalka La Liga. Barcelona ayaa hadda u baahan 6 dhibcood si ay koobka horyaalka La Liga ugu guulaysato iyada oo kulaka Clasico-du uu ka mid yahay kuwa ay koobkan ugu guulaysan karto.
Waxa uu noqon doonaa kulankii afraad ee El Clasico ah ee ay Barcelona iyo Real Madrid xili ciyaareedkan iskaga hor imanayaan iyaga oo hore laba kulan ugu soo wada ciyaaray Spanish Super Cupka kaas oo ay Real Madrid marti iyo minanba ku garaacday Barcelona.
Laakiin kooxda Valverde ayaa guul wayn ku soo gaadhay Santiago Bernabeu kulankii hore ee La Liga laakiin gabi ahaanba xaaladu waa mid ka duwan hadda iyada oo aanu wax shaki ahi ku jirin in Barcelona ay koobka La Liga ku guulaysanayso balse kaliya waxaa la sugayaa waqtiga uu noqon doono.
Laakiin xataa inta aan kulanka El Clasico-da aan kubbad la baasan ayay Barcelona ku sii guulaysan kartaa koobka La Liga haddii ay Atletico Madrid guuldarooyin kala kulanto saddex kulan oo ay ka hor waqtigan sii ciyaari doonto oo ah kulamada Real Socidad, Real Betis iyo Alaves isla markaana ay Barca guulaysato kulanka Deportivo maadaama oo ay Copa Del Rey inta kale ku mashquuli doonto.
Real Madrid ayaa ka hor kulanka El Clasico-da Camp Nou waxay ugu horayn u safri doontaa Bayern Munich kulanka lugta hore ee UEFA Champions League iyada oo kadib la ciyaari doonta Leganes iyo kulanka lugta labaad ee Bayern Munich oo ay Bernabeu ku soo dhawayn doonto.
Laakiin Barcelona ayaa ka hor kulanka El Clasico-da ku sii guulaysan karta koobkeedii 30 aad ee Copa Del Rey iyada oo xili ciyaareedkii afraad oo xidhiidh ah doonaysa in ay koobka boqorka Spain garoonkeeda Camp Nou markale ka soo dajiso inkasta oo Sevilla oo ay hore koobkan ugu soo xifiltameen ay isku wajihi doonaan garoonka Atletico Madrid.